Unganciphisa kanjani izinga "lekuseni" le-glucose yohlobo 2 sikashukela? > Ukwelashwa nokuvimbela
Ungabhekana kanjani noshukela wegazi: ukuncipha kwe-glucose kushukela
I-Amylin yi-hormone engena emzimbeni isuka kumaseli we-beta. Le hormone ivimbela ukukhululeka kweglucose egazini, futhi futhi yandisa umuzwa wethu wokugcwala emva kokudla. Kuzo zombili izinhlobo zesifo sikashukela, ukukhishwa kwe-amylin kuyancishiswa.
Ama-incretin ayiqoqo lama-hormone enza yonke imisebenzi efanayo ne-amylin. Akhiqizwa kusuka kwipheshana lesisu. Ziphinde zivimbele ukukhululeka kwe-glucagon kusuka kumanyikwe.
I-Glucagon yi-hormone ekhiqizwa amaseli we-pancreatic alpha. Iphula i-glucose bese iqoqeka. Ngesikhathi lapho umzimba ungakutholi ukudla, ushukela ukhipha ushukela ukuze sibe namandla asele.
Umzimba womuntu ophilile uyakwazi ukulawula amazinga kashukela egazini amahora angama-24 ngosuku. Kwenzekani ebusuku emzimbeni womuntu onesifo sikashukela? Asilungise.
Thayipha isifo sikashukela esingu-2 ngesikhathi sokulala
“Ngokutholwa” kohlobo lwesibili sikashukela, ushukela wegazi lomuntu uphuma ngaphandle kokulawulwa kwezinqubo zomzimba.
Isibindi nemisipha yomzimba ngesikhathi sokulala kuthola uphawu lokuthi izinga loshukela wegazi aliphezulu ngokwanele, ngoba umuntu akadli. Lokhu kucasula "ukukhishwa" kwezindawo zokugcina ushukela. Kodwa-ke, akunakwenzeka ukumisa ukukhiqizwa kwe-glucose, ngoba akukho-insulin eyanele ne-amylin emzimbeni wesifo sikashukela. Lokhu kuholela ekuphulweni kwe- "impendulo" phakathi kwazo zonke izinqubo ze-metabolic, nokungasebenzi kahle komzimba.
Ukuphazamiseka ezinqubweni ze-metabolic kungenxa yamazinga e-hormone, futhi hhayi isidlo sakusihlwa esinempilo noma ukudla okulula ngaphambi kokulala.
Izidakamizwa ezinciphisa ushukela ezithathwe ngesikhathi sokulala, njenge-metformin, zinganciphisa kakhulu amazinga kashukela ngokunciphisa ukukhiqizwa kwazo ebusuku. I-Metformin nayo inomthelela ekunciphiseni isisindo.
Ukwenza ngcono ushukela wekusasa egazini, ochwepheshe baphinde batusa ukunciphisa umzimba. Lokhu kusiza ukwandisa ukuzwela kwamangqamuzana nezicubu ukungena ku-insulin, okusho ukuthi ushukela wegazi ophansi. Unganciphisa isisindo kancane kancane: unciphise izingxenye, uguqule indlela odla ngayo ngokudla okunempilo, ukhuphula umzimba. Amazinga kashukela egazini azokwehla ngokulingana nomcibisholo webhalansi.
Odokotela baphinde batusa ukudla okulula ngaphambi kokulala. Amagremu ama-20 ama-carbohydrate azokwanela. Ochwepheshe banesiqiniseko sokuthi lokhu kusiza ukuthuthukisa ushukela wegazi ekuseni, ngoba kunciphisa isikhathi sokukhuphuka kokuphepha kweshukela.
Ukuzivocavoca kwandisa ukwanda kwe-insulin, ngakho-ke hambisa okuningi! Akukhathalekile ukuthi yisiphi isikhathi sosuku okhetha ukusivivinya ngalo, kubalulekile ukukwenza njalo, futhi imiphumela ngeke ithathe isikhathi eside.
Amazinga kashukela egazini ekuseni nawo angakhuphuka ngenxa yalokho okubizwa ngokuthi "yinto yokusa yokusa." I-glucose iyadingeka kumuntu lapho evuka, ngoba kunguyena omnikeza imali edingekayo yokukhanya kosuku lonke. Ngokubambisana nodokotela wakho, funda zonke izindlela nokukalwa kwe-glucose egazini lakho, hlola ukuthi yisiphi isikhathi sosuku ukugcwala kwalo okuvame ukufinyelela ngalo inani eliphakeme.
Ngaphambi kokuthatha izinyathelo zokunciphisa amazinga kashukela, udinga ukuqonda ngqo ukuthi yiziphi izinkomba ezibhekwa njengejwayelekile. Ukuthola izinga loshukela kusuka emunweni noma emthanjeni, kuthathwa igazi, elelashwa ngamakhemikhali akhethekile. Ngemuva kwalokho, ngosizo lwabanikazi bezithombe ze-photoelectric, ubukhulu bombala we-biological fluid kanye nezinkomba ze-glycemia kunqunywa.
Isifundo esinjalo kufanele senziwe esiswini esingenalutho, ngoba ngemuva kokudla, ukugxila kweglucose kuyashintsha. Kepha namuhla, amazinga kashukela angatholakala ekhaya, esebenzisa i-glucometer.
Kodwa-ke, lapho wenza ukuhlaziya, kufanelekile ukukhumbula ukuthi egazini le-venous (4-6.8 mmol / l), izinkomba zingaphezulu kakhulu kunama-capillary (3.3-5.5 mmol / l). Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kokudla, ezinye izinto zithinta imiphumela, njengokusebenza komzimba, isimo sokomzwelo, ubudala kanye nokuba khona kwezifo ezithile.
Ngakho-ke, izinkomba ezilandelayo zibhekwa njengejwayelekile:
izinsana - 2.8-4.4 mmol / l,
kusuka onyakeni ongu-1 kuye eminyakeni engama-60 - 3.9-5 mmol / l,
mdala kuneminyaka engama-60 - 4.6-6.4 mmol / l,
ukhulelwe - kuze kufike ku-5.5 mmol / l,
ngesifo sikashukela mellitus - 5-7 mmol / l.
Kepha ungabhekana kanjani noshukela wegazi ophakeme? Uma ukukhuphuka kukashukela kukhuphukile, khona-ke kungenziwa kube ngokwejwayelekile ngezindlela ezahlukahlukene.
Kodwa enye yezindlela eziphumelela kakhulu zokumisa i-hyperglycemia ukwelashwa kokudla nokwelashwa ngamakhambi abantu.
Ukudla kumele kuqashelwe nanganoma yiluphi uhlobo lwesifo, kepha kubaluleke kakhulu ukunamathela ekudleni okuqondile kwifomu lesifo elincike ku-insulin. Ngasikhathi sinye, imithetho eyinhloko iwukukhipha ngokushesha ama-carbohydrate asheshayo kusuka kwimenyu yansuku zonke futhi ulinganise umthamo wamaprotheni, amafutha kanye nama-carbohydrate.
Ngokuphathelene nokudla, lapho-ke kusuka ezinhlobonhlobo zokudla, umuntu kufanele anikeze okuthandwa kunalokho okungenayo i-GI ephezulu. Ngasikhathi sinye, kufanelekile ukwazi ukuthi akukho ukudla okwehlisa ushukela, kepha kukhona ukudla okungabangeli ukugxuma okungazelelwe ku-glycemia.
Lokhu kudla kufaka phakathi ukudla kwasolwandle, kusuka lapho kufanelekile ukugqamisa ama-spiny lobsters, ama-crabs kanye nama-lobster, ane-GI ephansi kakhulu. Futhi, ukudla okugcwele i-fiber akhuphulisi amazinga kashukela - okusanhlamvu, ama-legumes (ama-lentils) namantongomane (ama-almonds, ama-cashews, ama-walnuts).
Futhi kulolu hlu kukhona:
uwoyela odlwenguliwe futhi
ushizi wesoya, ikakhulukazi i-tofu,
izinongo (isinamoni, isinaphi, i-ginger),
imifino (i-broccoli, iklabishi, i-asparagus, i-zucchini, i-pepper bell, izaqathe, utamatisi, ukhukhamba, i-artichoke yaseJerusalema, u-anyanisi),
Emzabalazweni wokulwa noshukela ophakeme, indawo ebalulekile inikezwa ekudleni ongakuthola ukunxephezela isifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, ngesifo sohlobo 1, ukugcinwa kwaso kuphoqelekile, futhi esimweni sefomu elizimele le-insulin, ingxenye enkulu, umsoco kuhloswe ukulungiswa isisindo.
Kwi-hyperglycemia engapheli, kubalulekile ukwazi imiqondo eyisisekelo. Ngakho-ke, iyunithi elilodwa lesinkwa lilingana ne-10 g yama-carbohydrate. Ngakho-ke, kuye kwenziwa amatafula akhethekile esifo sikashukela esibonisa i-GI ne-XE yemikhiqizo eminingi.
Lapho wenza imenyu ekudleni, udinga ukususa ushukela, amaswidi, amafutha wezilwane nokudla okucolisisiwe. Futhi ukusetshenziswa kwe-semolina, ilayisi, pasta nesinkwa esimhlophe kufanele kugcinwe kungaphansi. Okuncamelayo kufanele kunikezwe kuma-carbohydrate ayinkimbinkimbi nokudla okuqukethe i-fiber yokudla, kuyilapho umuntu kufanele angakhohlwa ngokugcina ibhalansi.
Isidlo kufanele sibe sicaphukile. Ngakho-ke, ukudla kwansuku zonke kuhlukaniswe ngemithamo emi-3 eyinhloko nemilingo emi-2. Imenyu eyisibonelo yomuntu ophethwe yi-hyperglycemia engapheli:
Ukudla kwasekuseni - iqanda eli-1, ibhotela (5 g), isinkwa esinsundu (50 g), okusanhlamvu (40 g), ubisi (200 ml).
Isidlo sasekuseni sesibili yisinkwa esimnyama (25 g), izithelo ezingafakwanga magremu (100 g), ushizi wekhokho onamafutha aphansi (100 g).
Isidlo sasemini - imifino (200 g), ibhotela (10 g), izithelo ezomisiwe (20 g), amazambane noma inhlanzi enamafutha amancane, inyama (100 g), isinkwa esinsundu (50 g).
Isidlakela - ubisi noma izithelo (100 g), isinkwa esinsundu (25 g).
Ukudla kwakusihlwa - ukudla kwasolwandle (80 g), isinkwa esinsundu (25 g), imifino, amazambane noma izithelo (100 g), ibhotela (10 g).
Isidlakela sakusihlwa - i-200 ml ye-kefir ephansi.
Ngokuvamile, lapho wenza imenyu yabanesifo sikashukela, ungadla njengokudla okuyisisekelo esingu-9.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukunamathela emithethweni eminingana. Ngakho-ke, akufanele uvumele ukudla ngokweqile, unciphise ukuphuza usawoti bese unikela utshwala. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe kwe-caloric ekudleni kwansuku zonke kufanele kufike ku-2000 kcal, kodwa lapho ukhona umsebenzi womzimba.
Umthamo wosuku woketshezi okungenani amalitha amabili. Kulokhu, ukudla kufanele kuthathwe ngasikhathi sinye.
Ngakho-ke, uma kungenzeki ukuba ube nesidlo sasemini ngokugcwele noma isidlo sakusihlwa, udinga okungenani ukuluma (ngokwesibonelo, ukudla ucezu lwesinkwa) noma ukuphuza ingilazi yejusi.
Amakhambi anciphisa ushukela
Ngaphezu kokwelashwa kwesifo sikashukela, inkambo yalesi sifo ithuthukisa ukusetshenziswa kwezindlela zokupheka ezinconywe ngenye indlela yokwelapha. Ngakho-ke, esigabeni sokuqala sokubukeka, itiye elivela emaqabunga e-sitrobheli noma le-raspberry lusetshenziselwa ukunciphisa ukugxila kwe-glucose. I-10 g yesitshalo esomile ithululelwa ngamanzi abilayo, futhi ngemuva kwemizuzu engama-25, ihlungiwe futhi idakiwe ngendlela efudumele.
Entwasahlobo, kuyasiza ukudla isaladi lamaqabunga ama-dandelion amancane, aqukethe i-insulin yemvelo. Isitsha silungiswa kanjena: amaqabunga afakwe imizuzu engama-30. emanzini, bese yomile futhi ichotshoziwe. Futhi, i-dill, ebilisiwe iqanda leqanda ne-parsley kufakwa ku-dandelion futhi kunikezwe ukhilimu omuncu ongaphakeme noma uwoyela wemifino.
Ukwehlisa amazinga kashukela, uvame ukudla ubhontshisi omhlophe no-anyanisi. Ngakho-ke, ubhontshisi ufakwe emanzini kusihlwa, bese kudliwa ubhontshisi amabili esiswini esingenalutho, bese u-anyanisi ukhweziwe, kuthelwe ngobisi bese kufakwa emlilweni kuze kube yilapho imifino ithambile ngokuphelele, bese beyidla. Ukwelashwa kwenziwa njalo ezinsukwini eziyi-15.
Futhi, ukwenza amazinga e-glucose abe ngokwejwayelekile, phuza i-decoction yezimpande ze-chicory. I-1 tsp Izinto ezingavuthiwe zithululelwa ngamanzi abilayo bese zivutha umlilo imizuzu eyi-10. Lapho umkhiqizo ufakwa futhi upholile uthatha i-5 p. ngosuku ngo-1 tbsp. ukhezo.
Kwi-hyperglycemia engapheli, i-chicory herb nayo ingasetshenziswa, okuvela kuyo i-decoction. I-10 g yesitshalo esomile ithululelwa ku-500 ml wamanzi abilayo futhi yagcizelelwa isikhathi esingangehora. Ngemuva kokuthi isiphuzo sihlungiwe uthathe 3 p. 0.5 inkomishi ngosuku.
Enye yezinto ezisebenziseka kahle kakhulu ama-hypoglycemic agents yi-bird cherry, okungukuthi amajikijolo ayo, lapho kulungiswa khona i-decoction. 1 tbsp. l I-250 ml yamanzi ithululelwa ezintweni ezingavuthiwe, khona-ke yonke into ifakwa esitofini bese ibilisiwe imizuzu emithathu.
Umuthi ugcizelelwa amahora amabili, uhlungiwe futhi uthathe 3 p. 1/3 isitaki ngosuku. ngaphambi kokudla. Isikhathi sokwelashwa siyinyanga eyi-1, emva kwalokho ikhefu lenzelwa izinyanga ezingama-2-2 kanti ukwelashwa kuyaphindwa.
Ukunciphisa ngokushesha ushukela we-glucose, kufanele ulungiselele itiye elikhethekile, elihlanganisa izithako ezilandelayo:
amaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka
Ingxube ibekwe ku-thermos, uthele amanzi abilayo bese ugcizelela amahora ayi-8. Ukumiliselwa kudakwa esiswini esingenalutho isigamu sehora ngaphambi kokudla. Ngithanda ukuqaphela ukuthi ama-blueberries anesifo sikashukela angadliwa ngendlela yabo emsulwa, ngoba ama-berry aqukethe inani elikhulu lamavithamini.
Iqoqo lezidakamizwa elisuselwa kuma-stigmas ommbila, amaqabunga kamalibhele, ama-blueberries nama-podan emabhontjisi kunomthelela wehlise ushukela ngokushesha. Zonke izinto zithathwa ngamanani alinganayo ukuze kutholakale i-1 tbsp. l hlanganisa bese uthele ama-200 ml wamanzi.
Ngemuva kokuba umkhiqizo ubilisiwe imizuzu engu-5 futhi kwagcizelelwa ihora eli-1. Umuthi uyahlungwa futhi udakwe ngemuva kokudla enkomishini eyi-1/3. 3 k. ngosuku.
Kwi-hyperglycemia engapheli, kuqoqwa iqoqo lama-mint, izimpande ze-licorice, ama-birch buds (izingxenye ezi-2 ngayinye), okhalweni lwe-rose kanye ne-mamawort (izingxenye ezi-3), isentimenti se-Centaury kanye ne-burdock izimpande (izingxenye ezi-5 ngasinye) zilungiselelwe. Ama-tbsp amabili. l shanela uthele amalitha ayi-0,5 wamanzi abilayo bese ugcizelela amahora ama-3 ku-thermos. Umuthi udakiwe 3 r. 1/3 inkomishi ngosuku imizuzu engama-30. ngaphambi kokudla. Isikhathi sokwelashwa sifinyelela ezinyangeni ezi-3.
I-Aspen bark kungenye ikhambi elingathuthukisa kakhulu impilo yesifo sikashukela. Ama-tbsp amabili. l izinto ezingavuthiwe zithelwa ngamanzi bese zibilisiwe imizuzu engama-20. Umhluzi uphuzwa ngezingcezu ezincane usuku lonke.
Futhi, i-decoction ye-red currant kanye nezinso ze-sea buckthorn izosiza amazinga aphansi kashukela. Ukuyilungisa, thatha ingilazi engu-1 yezitshalo, bese uyigcwalisa ngo-450 ml wamanzi abilayo bese ugcizelela amahora ayi-2. Phuza ukumnika izinkomishi ezi-0,5. 3 k. ngosuku imizuzu engama-20. ngaphambi kokudla.
Oats futhi ngokushesha nangokuphumelelayo i-glycemia. Ukulungiselela i-decoction esekwe kuyo izinkomishi ezi-3. okusanhlamvu kuthelwa ngamanzi abilayo bese kubeka amahora angama-¼ kubhavu wamanzi. Ngemuva kwalokho ithuluzi liyasuswa bese lifakwa kwelinye ihora.
Umhluzi uphuza izinkomishi ezi-0,5. 3 k. ngosuku izinsuku ezingama-30 ngaphambi kokudla. Futhi, nge-hyperglycemia, ujusi otholakala ezihlahleni eziluhlaza zikakhokho uyasiza. Kuthathwa ngaphambi kokudla 3 p. 0.5 inkomishi ngosuku izinsuku ezingama-21. Ividiyo ekulesi sihloko izokukhombisa ukuthi unganciphisa kanjani ushukela kushukela.